The mputa mkpuchi ihe owuwu nke evaporator, mgbochi corrosion, ọzọ ume ịzọpụta na mmepụta;
Akụkụ kọntaktị na ice bụ igwe anaghị agba nchara, nchekwa na ịdị ọcha
Igwe igwe igwe igwe eji eme ice bu ihe nile akpokoro na ice bu igwe nwere igwe di elu iji kwado usoro nchekwa na idi ocha.
Ezubere igwe akpụrụ mmiri anyị, nke a makwaara dị ka onye na-eme ice ice, ka etinyere n'ụkpụrụ ụgbọ mmiri na CE (PED) ASME asambodo. All ice metụrụ akụkụ nke igwe anaghị agba nchara, na-ekwe nkwa na sturdiness na idebe ihe ọcha.
Containerized Brine Block Ice igwe
Snowkey akpa ejiri igwe akpụrụ mmiri dị mfe ibufe, saịtị ahụ achọghị nwuwu ọzọ, jikọọ ya na mmiri na ọkụ eletrik nwere ike ịmalite ọrụ ngwa ngwa.
Anyị bụ ndị na-egbochi ice igwe emeputa na soplaya na China.Our containerized ngọngọ ice igwe, kemgwucha kọmpat imewe, niile akụrụngwa arụnyere na ọkọlọtọ ISO akpa, na na factory mgbakọ na ule dechara.
Direct- jụrụ ngọngọ akụrụngwa igwe
Anyị ngọngọ ice igwe bụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-etinyere na ala-latitude mba maka ulo oru jụrụ, oké osimiri azu, nri nchekwa, ice ọkpụkpụ na ndị ọzọ.
Snowkey na-enye ezigbo ngwọta maka ịmepụta ice ngọngọ ma ọ bụ site na brine jụrụ oyi ma ọ bụ site na ịjụ oyi.
Ice slurry dị nro ma nwee kristal akpụrụ mmiri dị ntakịrị nke na-ebu azụ ngwa ngwa ma mee ka ọ dị ọhụrụ. Na njikọta na nnyefe sistemu, a na-agbanye ice slurry n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ ebe.
Ezubere igwe eji eji igwe eji agba oso eji ebi ogologo ndu na emezi ihe. Site n'ụgbọ mmiri na-egbu azụ ruo n'ikpere mmiri, anyị nwere ọtụtụ ahụmịhe na azịza.
Akingdị Mpempe Akpaaka Akpaaka
Keydị ụdị snowkey raking akpaka na-adaba na ụdị abụọ: ụdị dị iche iche na nke jikọtara. Mbughari na mfe iji wụnye, a haziri ha na ikike ịchekwa sitere na 18 ruo 200 tọn.